Molly akabva abata mboro yangu achibva anzwa kutsvedzerera neuronyo hwezemo achiva atoita manyemwe. Akatanga kugumisa mboro yangu matinji ake zvinyoro nyoro. Aifunga kuti ndichamurambidza nekuti ndakaknge ndisina kupfeka condom, asi iniwo zvenyama nenyama ndizvo zvandaifarirawo.
Ndakanzwa mboro ichiiswa mubeche, kusvika yapinda yese. Beche rakange rakatota, ndakanzwa kudziirwa uye Molly achibva atanga kusunga nyama dzebeche dzichiruma ruma mboro. Akati kovi kovi, ndokumira, ndokuti kovi kovi kovi ndokumira, achibva aisvomhora ndokuipukuta nehembe yake. Akaidzorera futi ndokuiruka akaigarira. Ndakanyatso misa gotsi nekunakirwa. Takagara takadaro kwekanguva, ndichibva ndazodzwa magaro aMolly asunga maziso akavharwa achibva andibatirira zvakasimba kunge simbi chaiyo, akabva atunda akadaro ndokutotesa bhurugwa rangu rese.
Categories : DzesviroTags : Ndakamukwapaidza nayo nyoro
PREVIOUS POST Previous post: I am married but vakandisejusa, ndokundikwira mudhara ivavo
NEXT POST Next post: Kukwirwa naStavo Benzi repamaShops!